Goolhayaha Barcelona oo noqday mid ka wanaagsan ciyaaryahanada kooxdiisa kulankii xalay. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Goolhayaha Barcelona oo noqday mid ka wanaagsan ciyaaryahanada kooxdiisa kulankii xalay.
Goolhayaha Barcelona oo noqday mid ka wanaagsan ciyaaryahanada kooxdiisa kulankii xalay.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 29-08-16 10:26 AM Ishaaro fiican ayaa usoo baxday, waxa muuqatay in kubbadduba ka dhismi doonto dhinaca dambe, baasaska ugu badanna uu bixin doono goolhayuhu, taas oo kalsooni abuuri karta.
Kulankii Xalay ee Barcelona ay booqatay Athletic Bilbao, inkasta oo uu ahaa mid aad u adag oo kubadda loo diiday xiddigihii caanka ku ahaa isku dhiibka, haddana meel kale ayey ishaaro wanaagsan uga soo baxday, taas oo ahayd goolhayaha 24 jirka ah ee Marc-Andre ter Stegen, kaas oo kubbadaha kooxda oo dhan ka soo habaynayey goolkiisa agteeda, isku dhiibkana kaga wanaagsanaa ciyaartooyo badan oo garoonka ku jiray.
Intii ay ciyaartu socotay waxa uu si xarrago leh ugu guuleystay in uu bixiyo 47 baas oo halkii uu ugu talo galay gaadhay, taas oo marka la barbar dhigo baasaskii uu dhiibay Sergio Busquets muujinaysa in uu kaba fiicnaa. Qaybtii hore, Sergio Busquets waxa uu bixiyey 33 kubbadood, waxaana ka wanaagsanaa goolhaye ter Stegen.
Inkasta oo ay halisteeda leedahay, haddana waxa ay Barcelona xalay kubbadda ka soo bilaabaysay goolkeeda, muuqaalka soo baxayna waxa uu noqday in Ter Stegen uu ka wanaagsan yahay Claudio Bravo.